Qurxinta Qolka Musqusha Ee 16ka "Faahfaahinta Eebbe", Samee Wax Sax ah, Waxay Ka Dhigi Kartaa Shaqooyinka Kala Badh
Bogga ugu weyn / blog / Qurxinta Qolka Musqusha Ee 16ka "Faahfaahinta Eebbe", Samee Wax Sax ah, Waxay Ka Dhigi Kartaa Shaqooyinka Badh Badbaadinta
Qurxinta Qolka Musqusha Ee 16ka "Faahfaahinta Eebbe", Samee Wax Sax ah, Waxay Ka Dhigi Kartaa Shaqooyinka Badh Badbaadinta
2021 / 04 / 22 Qoondayntablog 2668 0
Cinwaanada Shabakada Musqusha Shabakad Cusub
Waxaa la sheegay jikada dahabka iyo musqusha qalinka ah. Qurxinta guryaha dad badan, muhiimadda musqusha ma ahan mid aad u sarreeya. Xaqiiqdiina, suulku waa meel aan inta badan u isticmaalno maalin kasta, oo aannaan raacin isbedelka ama aan lacag badan ku bixinno. Ku saabsan musqusha ee 16-ka faahfaahin yar, waxaad u baahan tahay inaad ogaato!
Soo jiid qasabadda
Ku rakibida musqusha waa la fidin karaa qasabad, gabi ahaanba waa injiil jacayl ah in la dhaqo timaha OCD. Badanaa isticmaalku wuxuu noqon karaa dhowr shido oo lagu beddelo biyaha ka baxa. Waa isla shaqada madaxa qubeyska musqusha. Jiid si aad u dhaqdo timahaaga, dib u dhig markii aan la isticmaalin. Subaxdii adigoo degdegaya si aad u shaqo tagto, uma baahnid inaad furto qubeyska si aad biyaha oo dhan uga dul marto.
Qalabka gadaashiisa qalabka nadaafadda
Dhabarka albaabka musqusha waxaa loo isticmaalaa in lagu keydiyo aaladaha nadaafadda, marka la barbar dhigo kabadhka keydka ee khaaska ah ayaa aad uga fudud uguna kharash badan. Markaad furto albaabka, ma saameyn doonto bilicda albaabka. Qalabka nadiifinta darbiga sudhan sidoo kale si fiican ayaa loo miirayaa oo u qalalan karaa, ma soo saari doono ur. Si toos ah ayaa loogu nadiifin karaa musqusha, khadadka gaagaaban ee dhaqdhaqaaqa.
Shelf Qalajiyaha timaha
Qalajiyaha timaha toos ugama saarna miiska dushiisa, waxaa lagu keydin karaa khaanadaha cidiyaha ka caaggan, waxaa lagugula talinayaa in lagu xusho baaldiyo si loo yareeyo fiilada taabashada biyaha. Iyo tan ugu fiican waa qaabkan caalamiga ah, noocyo kala duwan oo timo qallajiyayaal ah ayaa la dhigi karaa. Isku-darka midabku ma aha oo keliya qiime sare, laakiin sidoo kale wuxuu ku siin karaa musqusha inuu sameeyo lahjadaha.
Qolka musqusha oo culeyskiisu dhan yahay 30 cm
Qolka musqusha wuxuu dusha sare ka maray 30 cm, halkii uu ka tagi lahaa farqi yar oo nadiif ah, salka ayaa waliba gelin kara dambiilo wax lagu keydiyo, iwm. Dabcan, haddii aad sidaa sameysid, bullaacadda musqusha ayaa ugu wanaagsan in la sameeyo safka derbiga, salka hoose ma soo bandhigi doono xuruuf aan fiicnayn.
Kala qoyan iyo qalalan
Musqusha ma sameyn karto afarta kala-goyn ee Jabaan, laakiin sidoo kale waxay ka wanaagsan tahay in la sameeyo kala-qoyn iyo qallalan, si maydhashada iyo suuligu u dhexgalin. Haddii ay jiraan dad badan oo guriga ku nool, xitaa waa muhiim in sidaas la sameeyo.
Musqusha caqliga badan
Musqulaha casriga ahi waa qaali, laakiin iyagu waa kuwa teknolojiyad ahaan ugu horumarsan yihiin iyo musqulaha ugu fiican ee la heli karo.
Niches waa habka ugu wanaagsan ee lagu kordhin karo booska keydinta musqusha, gaar ahaan musqulaha aadka u yar-yar, oo leh shelfyaal saameeya qubeyska. Sidee ku saabsan ku darista laba niches markaad qurxinayso. Qaabkan shaambo, jubbada qubeyska, wejiga dhaqo, iwm. Dhexda niche waxay noqon kartaa lebis ama alwaax dabiici ah. Markaad hagaajineyso, waxoogaa u janjeero xagga sare si aan biyuhu u ururin.
Musqusha qoriga lagu buufiyo
Musqusha musqusha ayaa faa iido u leh nadiifinta musqusha oo kaliya, laakiin sidoo kale nadiifinta darbiyada musqusha iyo dabaqa. Sababtoo ah xoogga qubeysku waa weyn yahay, waxaa lagu nadiifin karaa hal hawo, iyadoo badbaadineysa haweeneyda guriga joogta dadaal badhkiis.
Samee goob lagu keydiyo dharbaaxo
Xusuusnow inaad dhigato meel xafaayad lagu keydiyo oo lagu keydiyo qolka qubeyska, laakiin marna laguma talinayo inaad sibiibix si toos ah meesha ugu dhejisid. Ma aha oo kaliya qoyan, laakiin sidoo kale waxay umuuqataa mid qasan. Xullo darbado sibidhka darbiga ku dheggan sidan oo kale si ay sibidh kasta u ahaato mid qallalan oo nadaafad leh waqtiga.
Xabagta faashadda halkii koollada dhalada ah
Saldhigga Musqusha iyo farqiga dhulka ayaa guud ahaan loo isticmaalaa xabagta dhalada, xabagta dhalada ayaa caaryar noqon doonta mudo kadib. Sidee ku saabsan isticmaalida xabagta galaaska, qiimuhu waa raqiis oo wax ma dhisi doono. Marka loo barbardhigo koolada dhalada sidoo kale waxay u baahan tahay in si isdaba joog ah looga saaro caaryada, laakiin sidoo kale waqti badan iyo badbaado badan ayaa loo sameeyaa.
Kuleyliyaha aagga qubaysku wuu ka awood badan yahay qubayska iyo marawaxadda qiiqa, labadaba hawo-qaadashada qiiqa, laakiin sidoo kale kuleylka, qoyaanka, kuleylka kuleylka. Sidoo kale waa qalajin kartaa dharka, xulashada koowaad ee carruurta guriga.
Musqulaha cidhiidhiga ah, waxaa lagugula talinayaa inaadan dooran daasadaha qashinka furan, oo u muuqda kuwo aad u camiran oo waliba ur leh.
Had iyo jeer dareemo raaxo la'aan markaad musqusha isticmaaleyso, waxaa laga yaabaa inaad ka maqnaato saxarada musqusha. Ma aha oo kaliya inay fududahay in la isticmaalo musqusha, waxay kaloo yareyneysaa calool istaagga. Waxaa jira caruur guriga joogta, saxarada musqusha ayaa sidoo kale ka caawin karta caruurta inay bartaan musqusha Oh.
Laba duub haysta warqada musqusha
Haddii aad leedahay qoys ballaaran, waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho warqad musqul ah oo duuban oo labalaab ah. Muggan sida caadiga ah loo isticmaalo, iyo mugga dayactir, si looga fogaado ceebta musqusha warqad lama filaan ah.
Masaxada xaaqida biyaha
Dabaqa musqusha si loo ilaaliyo nadiifinta iyo nadiifinta muddada-dheer ma sahlana, oo masaxda masaxda sixirka, dhammaantood waxay noqon karaan kuwo aad u fudud. Hadday tahay qubeys maalinle ah ama dabaqa musqusha oo leh biyo taagan, ku qaado mashiinka xoqidda xoqidda xoqid. Saameyntu way ka fiican tahay xaaqida, laakiin sidoo kale ma laha calaamado biyo ah.
Guryo badan, albaabka suuligu wuu madhnaa, booskiina waa khasaaray. Xaqiiqdii, qalabka nadiifinta waligood lama keydin karo.
Hore:: Kan Dunida Ugu Horeeya! Fadhi Nabdoon Oo Faa'iido Leh Oo Ku Yaal Musqusha, Si Aad Ugu “Maydho” Xawaarahaaga Next: 220㎡ Jaranjarada Shanta Qol ee Hoose, Qaabka Casriga ah | Naqshadeynta Shirkadda Hongfu
USD Mareykanka (US) dollar